प्रेमदेखि मेघास्टारसम्म, अनमोल केसीको यस्तो जवाफ – An Online Entertainment News Portal
HomeEventप्रेमदेखि मेघास्टारसम्म, अनमोल केसीको यस्तो जवाफ
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अभिनेता अनमोल केसीलाई मन पराउने दर्शक र मन पराउने दर्शक उस्तै छन् । कतिपय अनमोल केसीलाई अभिनय नआउने भनेर आलोचना गर्छन् भने कतिपय अनमोलको क्यूट अनुहारको प्रशंसा गर्छन् । जे जस्तो भएपनि अनमोल केसीको हल्ला नेपाली फिल्म वृत्तमा अरु अभिनेताको तुलानामा धेरै हुने गरेको पाइन्छ ।
अभिनेता अनमोल केसी पनि संचारमाध्यममा कमै आउने कलाकार हुन् । कुनै कार्यक्रमको बेलामा भन्दा अरु बेला उनलाई भेट्न मुश्किल नै पर्छ । अभिनेता केसीको बिषयमा आउने विभिन्न गसिपलाई उनकै मुखबाट जवाफ सुन्नका लागि पत्रकारलाई पनि लामो समय कुर्नुपर्छ । अभिनेता केसी आज आफ्नो फिल्म क्याप्टेनको गीत रिलिज समारोहमा उपस्थित भए ।
सो समारोहमा उपस्थित भएका केसीलाई संचारमाध्यमबाट मेघास्टार हो या होइनदेखि अभिनेत्री सारा सिर्पालीसँगको प्रेमको प्रश्न तेर्सिएको थियो । जसको अभिनेता केसीले मिलाएरै जवाफ दिए । अभिनेता केसी जवाफ दिन सिपालु छन् ।
सारासँगको प्रेमको बिषयमा जवाफ दिदै अनमोलले यो रुमर मात्र भएको बताए । तर, उनी सुरुमा थोरै रमाइलो गर्ने मुडमा देखिएका थिए । उनले मेरो लभ पनि कति जनासँग पर्छ भन्दै रमाइलो गरे । एकजना पत्रकारले अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरी र आफ्नो बारेमा प्रेमको चर्चा चलेको भन्दै के हो भनेर सोधेको अनमोलले संझिए । यसैले यस्तो हल्ला भैराख्ने अनमोलले जवाफ दिए ।
अनमोललाई फेरि पत्रकारले सोधे, हावा नचली पात हल्लिन्छ र ? यसको पनि उनले जवाफ दिए । उनले लामो हाँसो हाँसे र हावा नचली पात हल्लिदैन तर यहाँ त खै के के कुराले हल्लाइन्छ हल्लाइन्छ । अनमोलले यसो भन्दा फेरि हलमा पत्रकार हाँसेका थिए ।
अनमोल केसीलाई मेघास्टार संचारकर्मी नरेश भट्टराइले भनेका हुन् । यसपछि उनको नामको अघि मेघास्टार झुण्डिन थालेको छ । यो प्रश्न कार्यक्रममा उठ्यो । अनमोल केसी कसरी मेघास्टार ?
यसको पनि उनले मिलाएर जवाफ दिए । अभिनेता केसीले आफू अहिले पनि संघर्षरत कलाकार भएको भन्दै आफूले आफूलाई कहिले पनि मेघास्टार नभनेको बताए ।
यो आफूलाई आफ्नो फ्यानहरुले भन्न थालेको भन्दै अभिनेता केसीले यो फ्यानको माया भएको बताए । केही फरक काम भएको कारणले त मेघास्टार भनिएको होला भनेर उनले जवाफ दिएका थिए ।
फिल्म क्याप्टेनका मुख्य अभिनेताले यो फिल्ममा काम गर्दा दुख भोगेको पनि बताए । धेरै दौडन पर्ने भएकाले पूर्वको गर्मीमा आफू बेहोस समेत हुने अवस्थामा पुगेको उनले सुनाए ।
अभिनेता केसीले रमाइलो मुडमा प्रेम र मेघास्टारको उपमाको जवाफ दिएका छन् । उनी अभिनित फिल्म क्याप्टेन फागूणको १७ गतेबाट रिलिज हुँदैछ ।
anmol kc gossip
anmol kc love & afair